सोचको चोरी हुनै सक्दैन, चोरी त अक्षरको मात्र भएको हो-निर्मल ज्ञवाली - MeroReport
प्रयोगात्मक स्वभावका निर्मल ज्ञवाली हरेक नयाँ चुनौतीहरुलाई स्वीकार्दै अघि बढ्न रुचाउँछन् । पेशाले आइटी ब्यवसायी निर्मल हाल अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्दछन् । जीवनलाई साहासिक (एडभेन्चर) यात्राको रुपमा लिने निर्मल आफ्ना लुकेका प्रतिभाहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडी ल्याउन प्रयास गर्दछन् । आइटी ब्यवसायका अलावा उनी सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । पछिल्लो समयमा सोसल मिडियामा बौद्दिक चोरीको कुरा निकै भईरहेको सन्दर्भमा निर्मलको भन्छन्-‘ सोचको चोरी हुनै सक्दैन । ती सोचहरु मेरा हुन्, र सदैव मेरा नै रहनेछन् । चोरी त अक्षरको मात्र भएको हो र ति बल्न नसकेका, आफै निभ्न लागेका बत्तिहरुको बारेमा सोचेर बस्न जिन्दगी छोटो छ, लाग्छ । म वास्तै गर्दिन ।ʼ मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै निर्मल ज्ञवालीलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
निर्मल ज्ञवालीलाई अरुले कसरी चिन्ने ? अलिकति आफ्नो बारे बताइदिनुस न ।
पेशागत रुपमा म एउटा आइटी प्रोफेसनल हुँ । करिब एक दशक देखि नै म आइटी सेक्टरमा काम गर्दै आएको छु । शैक्षिक अध्ययन हेर्ने हो भने ब्याचलर मेडिसिनमा गरेको छु । तर रुचि कम्प्युटरमा भएकोले बिभिन्न व्यवसायिक तालिमहरु संगै आइटीमा प्रवेश गरें । पछी नेपालबाट आइटीमा मास्टर गरें र विशेषज्ञता हासिल गर्न अष्ट्रलिया गएँ । अहिले करिब डेढ बर्षदेखि सिड्नीको "मार्केटिंग आई" कम्पनीमा प्रविधिक अधिकृतको रुपमा काम गर्दैछु ।
म पहिले एउटा आइटी प्रोफेसनल र सूचना प्रबिधि ब्लगरको रुपमा फेसबुक, ट्वीटरमा सक्रिय थिएँ भने अहिले र्‍यान्डम कुराहरु नै लेखिराखेको हुन्छु । सामाजका बिभिन्न विषयमाथि व्यंग्य, यात्राका अनुभव, संस्मरण, फोटोग्राफीहरु नै आजकल मेरा स्ट्याटस र ब्लग बन्ने गरेका छन् तर लिंक्ड-इन जस्ता व्यवसायिक मिडियामा भने म आइटी प्रोफेसनल कै रुपमा प्रस्तुत हुन्छु ।
मैले सन् २००६ मा Nirmal.com.np दर्ता गरेर ब्लगिङ शुरु गरेको थिएँ । आफुले जानेका केहि कुराहरु साटासाट गर्ने, आफ्नो सिप र पेशालाई ब्लग मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने र थोरै-थोरै भए पनि अनलाइन एडहरुबाट पैसा कमाउने भन्ने तिर मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । अझ भन्नु पर्दा मेरो मुख्य उद्धेश्य वेब डिजाइन र डेभलपमेन्ट सम्बन्धि जानकारीहरुको चौतारी बनाउने थियो र आफुलाई वेब डेभलपरको रुपमा चिनाउने थियो र यो पेशामा जम्नु थियो । त्यसैले आफुले जानेका र पढेका वेब सम्बन्धि कुराहरु पस्कने गर्थे म त्यो ब्लगमा । त्यसमा लेख्ने गरेको बिषय र त्यहाँ आउने पाठकहरु पूर्ण रुपमा सूचनाप्रबिधि संग सम्बन्धित नै थिए । र त्यस ब्लगको भाषा अंग्रेजि भएकोले बिभिन्न देशका कम्पनिहरुबाट मैले फ्रिल्यान्सिंगको प्रशस्त काम पनि पाएँ । ब्लगमा मैले आइटी सम्बन्धि नयाँ-नयाँ कुराहरु सेयर गर्ने हुनाले उनीहरुको बिश्वास जित्न र आफुलाई दख्खल प्रमाणित गर्न सजिलो भयो ।
त्यस पेशागत ब्लगमा आफ्ना व्यक्तिगत विचार र भावनाहरु पोख्नु अलि उचित लागेन र एउटा मनमा लागेका कुराहरु पोख्ने र गन्थन गर्ने थलोको रुपमा सन् २०११ देखि नेपाली ब्लगको रुपमा blog.nirmal.com.np संचालन गर्दै आएको छु । जसबाट मैले देश विदेशमा बस्नु भएका बिभिन्न साहित्यिक व्यक्तिहरुसंग परिचित हुने अवसर पाएको छु ।
आजकल म आफ्ना आवाज, अनुभव, विचारहरु पोख्नको लागि लेख्छु । मुख्य गरेर आत्म सन्तुष्टिको लागि लेख्छु र कहिलेकाहिँ दिमागको विरेचनका लागि । केहि लेखहरु पेशासंग सम्बधित पनि हुन्छन्, जसमा म आफ्नो अनुभव र अनुभूतिहरुलाई समेट्छु ।
म नियमित ब्लग लेख्ने मान्छे भने होइन । कहिलेकाहिँ हप्ता मै १०-१२ ओटा पनि पोस्ट गर्छु भने कहिले एक महिना सम्म ठप्प भएर बस्छु । म लेख्नका लागि भनेर लेख्दिन । कुनै बिषय, परिस्थितिले माइन्ड ट्रिगर गर्यो भने लेख्न बस्छु । र दिनहुँ जसो म आफ्नो अनुभव र दैनिक गतिबिधिहरु भने आफ्नो व्यक्तिगत डायरीमा लेखिराखेको हुन्छु । त्यसैबाट कुनै सार्वजनिक गर्न लायक लाग्यो वा ब्लगमा राख्दा कुनै सकारात्मक म्यासेज जानसक्छ जस्तो लाग्यो भने ब्लगमा पोस्ट गरिदिन्छु ।
म प्राय: घुमघाम, जीवन दर्शन, अध्यात्मिक विचार र साहित्य सम्बन्धी लेखहरु लेख्न मन पराउँछु । जसलाई म निबन्ध, संस्मरण, नियात्रा, कथा, अनुभव, बिचारको रुपमा ब्लगमा प्रस्तुत गर्छु र धेरै जसो लेखमा मेरो प्रस्तुति व्यंग्यात्मक र निश्कर्ष सकारात्मक बनाउने प्रयास हुन्छ, जसलाई पढे पछी पाठकले हल्का भएको महशुस गरुन् ।
तपाँइले चलाउने ब्लगहरु कुन कुन हुन ?
अहिले सक्रिय ब्लगको रुपमा यहीं एउटा blog.nirmal.com.np ब्लग छ । पेशागत व्यस्तताले गर्दा अन्य ब्लगहरु कब्जियत भएर बसेका छन् ।
सहि हो । मेरो बिचारमा लेख्नका लागि लेख्नेहरुका विचार भन्दा कुनै पेशामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आफ्नो पेशागत अनुभव र अनुभूतिहरु सेयर गर्नुले बढी अर्थ राख्छ र त्यस्ता व्यक्तिको समस्या भने समय व्यवस्थापन हो । तरपनि दिनको आधा-एक घण्टा लेख्नका लागि समय छुट्ट्याउनु कुनै गाह्रो कुरा भने होइन ।
यदि कोहि ब्लगर बन्ने नाममा मात्र ब्लग शुरु गर्छ भने उसको बिचारको भाड़ो रित्तिन कुनै समय लाग्दैन र त्यस्ता ब्लगहरु क्षणिक भइदिन्छन ।
ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ? कस्ता कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
नेपालमा ब्लगिङ गर्नेहरुको लागि लोडसेडिङ र इन्टरनेट एउटा समस्या हुन सक्छ तर जति समस्याहरु भए त्यति श्रृजनशील व्यक्तिहरुका लागि लेख्ने बिषय पनि बन्दै जान्छन् जस्तो लाग्छ । समस्याहरु छन् र त सोच्ने, लेख्ने बिषय पनि छन् ।
विदेश बस्नेहरुको लागि समय व्यवस्थापन एउटा मुख्य समस्या हुन सक्छ भने अनुकुल परिस्थिती नपाउनु अर्को ।
ब्लगिङ भनेको आफ्ना धारणा अभिब्यक्त गर्ने स्वतन्त्र मञ्च हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने त्यो व्यक्तिको कुरा हो । आफ्नो घर मजबुत बनाउने वा टालटुल पारेर थोत्रो ठडाउने, त्यो घरधनीको कुरा हो । राम्रो घर टिकाउ हुन सक्छ र धेरैलाइ ओत दिन्छ भने थोत्रो घर क्षणिक हुन्छ ।
घुमघाम र फोटोग्राफी मेरा अर्का रुचीका बिषय हुन् । समय परिस्थिति अनुकुल हुनासाथ म यात्रामा निस्कन्छु । नेपालको बसाइमा यहाँका प्राकृतिक डाँडापाखा र ट्रेकिंङ रुटहरु चहार्ने गर्थे भने हालसालै अष्ट्रेलिया, अमेरिका र चाइनाका मुख्य शहरहरुको दुइ महिना जति यात्रा गरेर आएँ ।
कुनै समय मोडलिङ र एक्टिङको पनि भुत सवार थियो । अहिले अलि मत्थर भएको छ तर पनि फिल्मी दुनिया मेरो चासोको बिषय रहेको छ । साथीहरु मिलेर फिल्म निर्माणको कार्य पनि भइरहेको छ ।
साथसाथै अहिले सिड्नीमा एउटा आइटी कम्पनी पनि संचालनमा ल्याएका छौँ । जसले नेपालमा एक दर्जन जति डेभलपरहरुलाई काम दिइरहेको छ ।
म प्राय: अफिसमा बसिरहँदा सूचना प्रविधि सम्बन्धि ब्लगहरु पढ्छु र फुर्सदको समयमा नेपाली ब्लगहरु पनि पढ्छु ।
नेपाली ब्लगहरुमा प्राय जीवनका भोगाई, अनुभव, दर्शन, साहित्य, घुमघामका बिषयहरुमा लेख्ने ब्लगहरु पढ्छु । स्याटेलाइट, जोतारे धाइबा, नरेन्द्र रौले, आकार, चापागाईं, लेनिन बन्जाडे, सुरथ गिरी, अर्थहिन शब्दहरु, माइसंसार, लेक्सलिम्बु जस्ता केहि ब्लगरहरु अहिले सम्झनामा छन् । साथै अन्य धेरै ब्लगहरु पनि चहारी रहेको हुन्छु ।
धेरै ब्लगहरु छन् जुन सामाजिक परिवर्तनका लागि परेका छन् । माइसंसार नै एउटा राम्रो उदाहरण हो ।
मलाई लाग्दैन ब्लगिङलाइ लगेर आचारसंहिताले बाँध्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेहरु प्रोत्साहित हुने, फैलने र नराम्रा काम गर्नेहरु आफै लोप हुदै जाने प्रकृतिको नियम हो ।
आजकलको यो व्यस्त समयमा पाठकहरु पाउनु सारै गाह्रो कुरा हो । पाठकहरुले नै आफै निर्णय गर्छन, को सच्चा, को झुठा लेखक भनेर । सच्चा लेखहरुको सुगन्ध नै अर्कै हुन्छ । ठग-ठाग लेखकका छेउ-न-टुप्पोका ब्लग पढेर को बस्छ होला र ?
म प्राय: व्यवसायिक लेखकका गुणस्तरीय ब्लगहरु मात्रै पढ्छु । त्यसैले मैले आचारसंहिताको बारेमा खासै सोच्नु परेको छैन ।
तर कहिलेकाहिँ नयाँ खुरापाती ब्लगरहरुले लेखहरु चोरेर आफ्नो ब्लगमा राखिदिंदा भने कता-कता हैरानी भने हुन्छ । तर म सोच्छु, सोचको चोरी हुनै सक्दैन । ती सोचहरु मेरा हुन्, र सदैव मेरा नै रहनेछन् । चोरी त अक्षरको मात्र भएको हो र ति बल्न नसकेका, आफै निभ्न लागेका बत्तिहरुको बारेमा सोचेर बस्न जिन्दगी छोटो छ, लाग्छ । म वास्तै गर्दिन ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए सुनाउनुस न ।
माइसंसारमा केहि समय अगाडी एउटा कथा लेखेको थिएँ "फ्रिडम टु डाई" । त्यस्तै प्रकारको प्रसंग (युथानासिया) मा फिल्म पनि बनेको रैछ र केहि देशहरुको संबिधानमा त्यस्तै नियम पनि रैछ । मैले त्यो फिल्म पनि हेरेको थिइन र ती कानुनी मान्यताहरुको बारेमा केहि पनि थाहा पाएको थिइन । पाठकहरुको कमेन्ट पढेपछी आफैलाई अचम्म लाग्यो र धेरै कुराको जानकारी पनि भयो ।
ब्लग, ट्विटर र फेसबुक फरक प्रकारका सोसल मिडिया हुन् । फेसबुक, लिंक्डइनहरु समान बिचार, पेशा भएका साथीभाइहरुको कनेक्सनको जालो हो भने, ट्विटर माइक्रो ब्लगिङको चौतारी हो र ब्लग आफ्नो विचार पोख्ने थलो हो । यी सबैले आफ्नो फरक अस्तित्व राख्छन् ।
नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ ?
अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत, प्रशान्त तामाङ, तेरिया मगरका घटनाहरुले नै बताउछन् कि नेपालीहरु सोसल मिडियामा कति सक्रिय छन् र कुन हिसाबमा प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर ।
ब्लगिङलाइ कँहि कतै बैकल्पिक मिडिया अर्थात ब्यक्तिको निजी मिडियाका रुपमा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ तर पनि यो अँझै काठमाण्डौ केन्द्रित मात्र भइरहेको छ र मोफसलमा ब्लगरहरु एकदमै कम छन भन्ने पनि गरिन्छ नि । किन होला?
धेरै जसो पढ्छु, केहि बन्छु र केहि गर्छु भन्ने व्यक्तिहरुको जमात काठमाण्डौ मै ओइरिएकोले वा काठमाण्डौले तानेकोले त्यस्तो भएको हो र हाम्रो देशका सबै विकास, सुविधा, शिक्षा, कार्यालयहरु नै काठमाण्डौ केन्द्रित भएको अवस्थामा ब्लगिङ पनि काठमाण्डौ केन्द्रित हुनु कुनै नौलो कुरा होइन ।
ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिताको रुपमा पनि अघि बढिरहेकै छ । यो मुलधारको पत्रकारिता भन्दा स्वतन्त्र हुने हुनाले जुनसुकै विषयमा पनि आफ्ना धारणा र विचार खुलेर राख्न सकिन्छ ।
मेरो रिपोर्टले ब्लगरहरुलाइ एकीकृत गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ जुन प्रभावकारी माध्यम पनि बनेको छ । यसलाई अझै सशक्त रुपमा लैजान सके सम्पूर्ण नेपाली ब्लगरहरुको एउटै थलो बन्ने थियो ।
Comment by Prakash Lamichhane on August 6, 2014 at 2:20pm
Comment by Amuna Chapagain on August 6, 2014 at 12:57pm
Congratulations Nirmal Jee !